Fal argagax leh oo ka dhacay degmada Guriceel – Balcad.com Teyteyleey
Wararka ka imaanaya magaalada Guriceel ee gobolka Galgaduud ayaa sheegaya in saakay halkaasi ay ka dhacday dhacdo argagax leh kadib markii nin la sheegay in uu kamid aha adadka deegaanka uu xaaskiisa gowracay.
Dadka deegaanka ayaa ku waramay in nin Madaxa looga jiray oo magaciisa lagu sheegay Maxamed Xaaji Cabdi Siyaad uu gowracay xaaskiisa Canab File oo u heysay 8-caruur Don’t know where you should look for an affordable brand cialis deal? Rejoice and shine, because brand cialis is available at our store for 5.23 USD! ah, waxaana la sheegay in ninkan xaaskiisa uu si xun u dilay .
Ciidamada maamulka Ahlu Sumna ayaa gacanta ku dhigay ninka gowracay xaaskiisa, waxaana hada ninkan uu ku xiran yahay xabsi kuyaala magaalada Guriceel, dhacdadan ayaana noqotay mid argagax badan ku beertay dadka ku dhaqan Guriceel.
Dhacdadan naxtinta leh ee saakay ka dhacday magaalada Guriceel ayaana noqotay mid si weyn looga hadal hayo magalaadaasi, mana ahan dhacdan mid ku cusub gayiga Soomaaliya.
Taliyaha ciidamada Milatariga oo beeniyay in uu Iscasilay.